Ny fiainana sy ny zavakanton'i Mark Rothko
Mark Rothko (1903-1970) dia iray amin'ireo mpikambana fanta-daza indrindra amin'ny hetsika Expressionist Abstract , fantatra amin'ny ankamaroan'ny sary sokitra . Ny sonia malaza dia sary hosodoko faran'izay haingon-tsarimihetsiketsika, izay mifototra amin'ny karazam-bolo lehibe misy loko, manintona, mifintina, mifandray amin'ny, ary mitondra ny mpijery any amin'ny faritra hafa, ny endrika hafa, manafaka ny fanahy avy amin'ny tsy fitovian'ny adin-tsaina isan'andro.
Ireo sary hosodoko matetika dia mamirapiratra avy ao anatiny ary toa velona sy miaina ary mifandray amin'ny mpijery amin'ny fifanakalozan-kevitra mangina, mamorona fahatsiarovan-tena ho masina amin'ny fifampiraharahana, mampahatsiahy ny fifandraisan'ny I-Thou voalazan'ilay manam-pahaizana malaza Martin Buber.
Momba ny fifandraisana amin'ny asany amin'ny mpijery dia nilaza i Rothko hoe: "Ny sary dia miaina miaraka amin'ny mpiara-mitory, mihamitombo ary mihazakazaka eo imason'ilay mpandinika tsara. Maty noho izany ihany koa izy. Noho izany dia mety hampidi-doza ny mandefa an'ity tontolo ity. Impiry impiry moa izy io dia tsy tokony hohamaivanin'ny mason'ny faniriana sy ny habibian'ny tsy manan-tsaina. "Hoy koa izy: 'Tsy liana amin'ny fifandraisana eo amin'ny endrika sy ny loko. Ny zavatra tokana itiavako dia ny fanehoana ny fihetseham-pon'ny olona: ny tragic, ny ekstazy, ny anjara.
Rothko dia teraka i Marcus Rothkowitz tamin'ny 25 Septambra 1903 tao Dvinsk, Rosia. Tonga tany Etazonia izy tamin'ny 1913 niaraka tamin'ny fianakaviany, nipetraka tany Portland, Oregon.
Maty tsy ela ny dadany rehefa tonga tany Portland i Marcus ary niasa tao amin'ny orinasa mpanamboatra ny akanjon'izy ireo ny fianakaviany mba hifanatrika. Mpianatra tena tsara i Marcus, ary nijery ny zavakanto sy ny mozika nandritra ireo taona ireo, nianatra naka sary sy nandoko ary nilalao ny mandoline sy piano. Rehefa nihalehibe izy dia nanjary liana amin'ny antony ara-piarahamonina ara-sosialy sy politika ankavia.
Tamin'ny Septambra 1921 dia nanatrika ny Oniversiten'i Yale izy ary nijanona nandritra ny roa taona. Nianatra momba ny zavakanto sy siansa liberaly izy, ary nanazava gazety gazety liberaly iray, ary nanohana azy tamin'ny asa tsy mahazatra alohan'ny nialany an'i Yale tamin'ny taona 1923 nefa tsy nahazo diplaoma tamin'ny tenany ho mpanakanto. Nanorim-ponenana tao New York City izy tamin'ny 1925 ary nisoratra anarana tao amin'ny Arts Student League izay nampianarin'ny mpanakanto Max Webe r, ary Parsons School Design izay nianarany tao Arshile Gorky. Niverina isan-kerinandro tany Portland izy mba hitsidika ny fianakaviany ary nanatevin-daharana orinasa mpanao fihetsiketsehana iray tao indray mandeha. Ny fitiavany ny teatra sy ny tantara dia mbola nitana anjara toerana lehibe teo amin'ny fiainany sy ny zavakanto. Nolokoiny ny sehatry ny fampisehoana, ary niresaka momba ny sary hosodoko izy, "Mieritreritra ny sariko aho amin'ny horonan-tsary, ny endrik'ireo sariko dia ireo mpanakanto."
Tamin'ny 1929-1952 dia nampianatra ny zavakanton'ny ankizy tao amin'ny Centre Academy, Brooklyn Jewish Center, i Rothko. Tiany ny fampianarana ny ankizy, nahatsapa izy fa ny valiny tsy voatery tsy ampiasaina amin'ny zavak'izy ireo dia nanampy azy hisambotra ny maha-izy ny fihetseham-po sy ny endriny amin'ny asany.
Ny seho voalohany nataony voalohany dia tamin'ny taona 1933 tao amin'ny Galerie Contemporary Art in New York. Tamin'izany fotoana izany, ny sary hosodoko dia ahitana lembalemba, sary, ary fihainoana.
Tamin'ny taona 1935 dia niara-niasa tamin'ny artista valo hafa i Adolph Gottlieb, niaraka tamin'i Adolph Gottlieb, mba hananganana vondrona iray antsoina hoe The Ten (na dia sivy aza), izay voataonan'ny Impressionism , dia nanao hetsi-panoherana ho an'ilay zavakanto izay naseho tamin'izany fotoana izany. Ny Ten dia nanjary fanta-daza indrindra tamin'ny fampiratiana azy ireo, "The Ten: Whitney Dissenters", izay nisokatra tao amin'ny Mercury Galleries telo andro taorian'ny nanokafana ny Whitney Annual. Ny tanjon'ity hetsi-panoherana ity dia nambara tamin'ny teny fampidirana tao amin'ny katalaogy, izay nanoritsoritra azy ireo ho toy ny "experimenters" sy "individualist strongly" ary nanazava fa ny tanjon'izy ireo dia ny hiantso ny saina Amerikana izay tsy ara-bakiteny, fa tsy misolo tena ary sahirana amin'ny loko eo an-toerana, fa tsy "amin'izao androntsika izao raha tsy amin'ny fe-potoana ara-potoana fotsiny." Ny iraka nasehon'izy ireo dia "hanohitra ny fitovian'ny sary hoso-doko amerikana sy sary hosodoko."
Tamin'ny 1945 dia nanambady fanindroany i Rothko. Niaraka tamin'i Mary Alice Beistle, vadiny faharoa, i Kathy Lynn tamin'ny 1950, ary i Christopher tamin'ny 1963.
Taorian'ny taona marobe tamin'ny tsy fahamendrehana tamin'ny maha-mpahaikatra azy dia nitondra an'i Rothko tamin'ny farany ny taona 1950 ary tamin'ny 1959 i Rothko dia nanana fampisehoana lehibe iray tao New York tao amin'ny Museum of Modern Art. Izy koa dia niasa tamin'ny kaomisiona telo lehibe nandritra ny taona 1958 hatramin'ny 1969: sary hosodoko ho an'ny Centre Holyoke ao amin'ny Oniversiten'i Harvard; sary hosodoko monomena ho an'ny tranom-bahiny Four Seasons sy Building Seagrams, na any New York; ary sary hosodoko ho an'ny Chapelle Rothko.
Rothko dia namono tena tamin'ny faha-66 tamin'ny taona 1970. Ny sasany mieritreritra fa ny sary hosodoko maizina sy sombera izay nataony tamin'ny faramparany tamin'ny asany, toy ny an'ny Rothko Chapel, dia manambara ny famonoan-tenany, fa ny hafa kosa mihevitra ireo asa ireo fa ny fanokafana ny fanahy ary fanasana amin'ny fanentanana ara-panahy bebe kokoa.
Ny Chapelle Rothko
Rothko dia notendren'i John sy Dominique de Menial tamin'ny taona 1964 mba hamoronana sehatra misimisy feno ny sary hosodoko noforonina manokana ho an'ilay toerana. Ny Chapelle Rothko, natsangana niaraka tamin'ny architects Philip Johnson, Howard Barnstone, ary Eugene Aubry, dia vita tamin'ny farany tamin'ny 1971, na dia maty tamin'ny 1970 aza i Rothko ka tsy nahita ny trano farany. Tranom-biriky efa-bolana tsy misy ordinatera izay misy efatra ambinifolo ny sary hosodoko Rothko. Ny sary hosodoko dia ny mari-pamantaran-drivotra nataon'i Rothko, na dia marefo aza izy ireo - fito seza misy ranjan-kazo mainty vita amin'ny mainty hoditra, ary sary hosodoko fito volomparasy.
Fiangonam-pirahalahiana iraisam-pirenena izay mitsidika manerana izao tontolo izao. Araka ny tranonkala The Rothko Chapel, "The Chapel Rothko dia sehatra ara-panahy, sehatra ho an'ny mpitarika an'izao tontolo izao, toeram-ponenana ho an'ny irery sy ny fivoriana. ireo olona 90.000 amin'ireo mpitsidika isan-taona avy any amin'ny faritra rehetra manerana an'izao tontolo izao no tranon'ny loka Óscar Romero. " Ny Chapelle Rothko dia ao amin'ny National Register of Historic Places.
Fiantraikany tamin'ny Art Rothko
Nisy fiantraikany be teo amin'ny zavakanto sy ny fisainan'i Rothko. Amin'ny maha-mpianatra azy tamin'ny tapaky ny taona 1920, Rothko dia voatarik'i Max Weber, Arshile Gorky, ary Milton Avery, izay nianarany fomba maro samihafa nanatona ny hosodoko. Nampianatra azy momba ny Kiobisma sy ny sary hoso-doko tsy akory ny Weber; Gorky dia nampianatra azy momba ny Surrealism, ny fisainana ary ny sarivongana; ary Milton Avery, izay niara-nisakafo taminy nandritra ny taona maro, dia nampianatra azy momba ny fampiasana loko marevaka matevina mba hamoronana lalina amin'ny alalan'ny fifandraisana loko.
Tahaka ireo mpanakanto marobe, Rothko koa dia nankasitraka tanteraka ny loko Renaissance sy ny harenany ary ny endriny ivelany hita taratra amin'ny alalan'ny fampiharana ny loko maro misy loko manify.
Amin'ny maha-olona mianatra azy, dia misy fiantraikany hafa koa i Goya, Turner, ny Impressionista, Matisse, Caspar Friedrich, ary ny hafa.
Nianatra tamin'i Friedrich Nietzsche , filozofa alemà tamin'ny taonjato faha-19, i Rothko, ary namaky ny bokiny hoe The Birth of Tragedy .
Nampidiriny tao amin'ny sarin'i Nietzsche ny filozofia momba ny ady teo amin'ny Dionysiana sy Apollonian.
Rothko koa dia nisy fiantraikany teo amin'i Michelangelo, Rembrandt, Goya, Turner, ny Impressionista, Caspar Friedrich, ary Matisse, Manet, Cezanne, mba hitonona afa-tsy vitsivitsy.
Ny taona 1940 dia folo taona manan-tantara ho an'i Rothko, iray izay nandalo fiovana maro teo amin'ny fomba, nipoitra avy aminy tamin'ny loko malaza colorfield izay voalohany indrindra niaraka taminy. Araka ny voalazan'i Christopher Rothko zanany lahy tao MARK ROTHKO, The Decisive Decade of 1940-1950 , Rothko dia manana endrika dimy na enina isan-taona tamin'ity folo taona ity, ny tsirairay dia ny fitomboan'ny iray teo aloha. Izy ireo dia: 1) Figurative (c.1923-40); 2. Surrealiste - Ny fototeny (1940-43); 3. Surrealiste - Abstracted (1943-46); 4. Multiform (1946-48); 5. Fiantohana (1948-49); 6. Classic / Colorfield (1949-70). "
Indray mandeha tamin'ny taona 1940 i Rothko dia nanao sary hosodoko farany teo, ary avy eo dia nanandrana tamin'ny Surrealism, ary tamin'ny farany dia nanala tanteraka ny soso-kevitra tao amin'ny sary hosodoko izy, nanalany azy ireo bebe kokoa ary nampifanaraka azy ireo tamin'ny fetra tsy voafaritra miparitaka amin'ny loko - Multiforms araka ny niantsoana azy ireo avy amin'ny hafa - izay voatarikan'ny fomban-doko nataon'i Milton Avery. Ny Multiforms dia ny abstractions marina voalohany nataon'i Rothko, raha toa kosa ny palette maneho ny palette amin'ny sary hosodoko faran'izay tsara. Manazava bebe kokoa ny fikasany izy, manafoana ny endriny, ary manomboka sary hosodoko amin'ny taniny tamin'ny taona 1949, mampiasa ny lokony ho fanehoana bebe kokoa amin'ny famoronana tsangam-bato goavam-be ary hampitana ny fihetseham-pon'ny olombelona ao anatiny.
Rothko dia fanta-daza indrindra amin'ny loko eny an-tanany, izay nosoratany tamin'ny faran'ny taona 1940. Ireo sary hoso-doko maro dia maro kokoa ny sary hosodoko, saika feno rindrina iray manontolo avy eo amin'ny ety ivelany. Ao anatin'io sary hosodoko io dia nampiasa ny teknolojia manala volo izy , izay novolavolain'i Helen Frankenthaler tamin'ny voalohany. Izy dia hampihatra ny loko misy loko matevina eo amin'ny lakandrano mba hamoronana raki-tsoratra roa na telo marevaka mivelatra.
Nilaza i Rothko fa be ny sary hosodoko mba hahafahan'ny mpijery hiditra amin'ilay traikefa fa tsy misaraka amin'ny sary. Raha ny marina dia tiany ny hanana ny sary hosodoko aseho miaraka amin'ny fampiratiana mba hampisy fiantraikany bebe kokoa amin'ny toetran'ny sary hosodoko, fa tsy asiana sary hoso-doko hafa. Nilaza izy fa ny sary hosodoko dia tsy manan-tsahala ho "lehibe", fa raha ny tena marina, mba ho "tia lalina sy ny olombelona". Araka ny voalazan'ny The Phillips Gallery any Washington, DC, "Ny sary sokitra lehibe misy azy, ny karazana loko matanjaka, dia mametraka ny fifandraisana iray amin'ny iray amin'ny mpijery, izay manome ny mason'ny olombelona amin'ny traikefa eo amin'ny sary hosodoko ary mampitombo ny fiantraikan'ny loko. Ny vokatra, ny sary dia mamolavola ny fahatsapana ny toetra sy ny fitoviana ara-panahy. Amin'ny alalan'ny loko iray-izay ampiharina amin'ny tsangantsanganana mihantona ao anatin'ireo singa mahavariana-ny asa nataon'i Rothko dia manentana ireo fihetseham-po mahery vaika manerana ny hatsiaka sy ny tahotra amin'ny fahakiviana sy ny fanahiana, dia soso-kevitra noho ny endrika manjavona sy tsy voafaritra. "
Tamin'ny taona 1960, nanangana efitrano manokana natokana ho an'ny sarin'i Mark Rothko, antsoina hoe The Rothko Room, ny Galerie Phillips. Izy io dia misy sary hosodoko efatra nataon'ilay mpanakanto, sary hosodoko iray isaky ny rihana kely iray, manome ny habaka ho an'ny meditative.
Rothko dia tsy nanakana ny asa fanendrena nentim-paharazana tamin'ny faramparan'ireo taona 1940, fa aleony manavaka azy amin'ny lokony na ny isa. Tahaka ny nanoratany momba ny zavakanto nandritra ny androm-piainany, toy ny ao amin'ny bokiny, The Reality of the Artists: Philosophies on Art, nosoratana tamin'ny 1940-41, dia nanomboka nanohy nanazava ny hevitry ny asany tamin'ny sary sokitra misy azy izy, ary nilaza fa "ny fahanginana tena marina. "
Izany no fototry ny fifandraisana misy eo amin'ny mpijery sy ny loko manan-danja, fa tsy ny teny mamaritra azy. Ny sarin'i Mark Rothko dia tokony hanana traikefa amin'ny olona mba ho tena ankasitrahana.
Loharanom-baovao sy famakiana bebe kokoa
> Kennicot Philip, efitra roa, 14 Rothkos ary tontolo manavaka , Washington Post, 20 Janoary 2017
> Mark Rothko (1903-1970), Biography, The Collection of Phillips
> Mark Rothko: The Reality of the Artist , http://www.radford.edu/rbarris/art428/mark%20rothko.html
> Ny fisaintsainana sy ny haitao ankehitriny dia mivory ao amin'ny Chapelle Rothko , NPR.org, 1 Martsa 2011
> Ny Lovan'i Rothko , PBS NewsHour, 5 Aog 1998
Ny Tantara Taorian'ny Vehivavy Monet Tao Amin'ny Zaridaina
Safidy 4 ho fampivoarana slides amin'ny format dizitaly
Torolalana ho an'ny mpandidy mba hianatra ny fomba hanolorana
Biographie momba ny mpanakanto Jean-Michel Basquiat
Ireo Elements of Painting
10 Fampakaram-peo sary sokitra fampakaram-bady
6 Ny tena zava-misy amin'ny andro ankehitriny
Biographie momba an'i Salvador Dalí, Artist Surrealist
Ny fiainana sy ny zavak'i Paul Klee
Ny fiainana sy ny zavakanto nataon'i John Singer Sargent
Fampidirana ny vanim-potoanan'ny Romantic
Top Prints Songs of the '80s, Volume 1
Fiction romantic period - American Literature
Winnipeg: Renivohitry Manitoba, Tanànan'ny Plains
Inona no atao hoe fitondran-tena mitovy?
Fiheverana mijery ny fahotana mahafaty 7
100 Amerikana Avaratra Amerikanina Avaratra: Black Cherry Tree
Ny Lapan'i Minos ao Knossos
Ahoana ny fomba fijerena ny sahan-dàlana amin'ny bolt-action Gifle na pistol
Iza moa i Tituba avy any Salem?
Surf Kayaking Principles: Tips and Steps
Vavaka ho an'ny vadiko malahelo
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny toetran'i Bell
Mike Tyson - Ady amin'ny ady
Inona no atao hoe Theism of Agnostic?
Salaries of Senators Canadian
Jerry Brudos, mpamono olona
Kick Shot ao anaty dobo
Famaritana ny fiantraikany sy ny ohatra nasehony
Vietnam War: Amerika Afovoany F-100 Super Saber
Revue de Potter West Wight 19
Biographie momba ny Dr. Bernard Harris, Jr.